MINISTERAN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA: Hatsahatra ny lalana mifehy ny sarimihetsika | déliremadagascar
Didim-panjakana no mamaritra ny fananganana sampandraharaham-panjakana sy manendry ny olona hitantanana izany fa tsy ny lalàna, araka ny lalàna 2018-037. Ny lalàna anefa no nametraka ny ofisy malagasy ny sarimihetsika (OMACI) izay eo ambany fiahian’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina. Mandika ny lalàm-panorenana anefa izany, hoy ny sekretera jeneralin’ny ministeran’ny kolontsaina, Ralaimazava Johary nandritra ny fihaonan’ny ministera mpiahy ny OMACI niaraka tamin’ireo mpisehatra amin’ny sarimihetsika malagasy, ny 4 aprily 2019. Nambarany fa ny lalàna ihany no manery ny hanatsaharana ny lalàna mifehy ny sarimihetsika sy ny sary miaina (cinéma et image animée), laharana 2017-011.
Nilaza ihany koa ny talen’ny fifandraisana amin’ny daholobe eo anivon’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina, Ranarivelo Nampoina fa hitondra fanatsarana no tanjon’ny ministera (…) ka ao anatin’izany dia nisafidy ny hanatsahatra ny lalàna mifehy ny sarimihetsika sy ny sary miaina ny ministera. Nambarany fa tsy manana zavatra efa vonona ry zareo fa ny mpisehatra no afaka milaza ny tiany amboarina sy hohatsaraina. Izay no nampiantsoin’ny minisitera ny mpisehatra rehetra satria maro ny mitaraina fa misy lalàna sy rafitra tsy mety, hoy hatrany izy. Anisan’ny olana amin’ity lalàna mifantoka amin’ny sarimihetsika ity ny maha voasaringotra ny sehatry ny sary sy feo toy ny “clip”, “jeu vidéo”, araka ny fanazavan’ireo mpisehatra. Manoloana izany dia antony iray niantsoana ireo mpisehatra ny fanangonana ny hevitra ahafahana manatanteraka rafitra sy lalàna iraisan’ny rehetra, hoy hatrany ny talen’ny fifandraisana amin’ny amin’ny daholobe. Mbola hitohy amin’ny fotoana manaraka ny fakan-kevitra. Ireo mpisehatra amin’ny sarimihetsika malagasy kosa amin’izao fotoana izao dia tsy manaiky io fanatsaharana io.